HAFT KOMPUTEROWY P&M clothes Dharka xayaysiinta • Dharka shaqeeya
Xirfadlayaal kombiyuutareed ku shaqeeya
Soo hel alaabadayada
Waxaan nahay shirkad Polish ah oo leh caadooyin, soosaarayaal iyo qaybiyayaal
shaqo tayo sare leh iyo dharka xayeysiinta.
Qolka dharka lagu tolo
- fursadaha wax soo saarka ballaaran
Waxaan leenahay qol leyn noo gaar ah - waxaan u tolannaa si sax ah sidaad filayso. Awooda wax qabadkeena waxay noo ogolaaneysaa inaan soo saarno kumanaan shey bishiiba.
alaabada la soo saaray bil kasta
Soosaar deg deg ah
iyo gaarsiinta albaabkaaga.
Dhammaan amarradu si dhakhso leh ayaa looga baaraandegayaa, taariikhaha horay loo sii ballamay, ka dib waxaan ugu dirnaa diris ama kabadha xaashiyaha si ay sida ugu dhaqsaha badan kuguula soo xiriiraan.
P&M - waa qolka harqaanka tolidda dharka lagu tolo ee kumbuyuutarka hogaamiya
P&M waa qol dharka lagu tolo oo Polish ah oo ka shaqeeya Rawa Mazowiecka ilaa 1995. Waxaan bixinnaa adeegyo tolid, goyn, dhejis iyo calaamadeyn.
Waxaan ku takhasusay isku-darka kombiyuutarka ee xayeysiinta iyo dharka shaqada.
Ujeedadayadu waxay ku wajahan tahay shirkadaha iyo kuwa wax iibsada. Haddii aad xiisaynayso inaad ka iibsato hal shay, fadlan booqo annaga dukaanka khadka tooska ah.
P&M waxaa laga sameeyaa dadka. Iyagu waa xirfadlayaal aqoon sare leh oo khibrad leh oo ku farxi doona inay ku siiyaan talo iyo caawimaad xagga doorashada habka ugu fiican iyo naqshadeynta si alaabadaadu u ekaato mid gaar ah.
P&M - qalab iyo fursado
Qolka harqaanka ee P&M wuxuu leeyahay qalab casri ah oo u oggolaanaya inuu la kulmo xitaa rajooyinka ugu sarreeya ee macaamiisha.
Xadiiqadeena mashiinada waxaa ka mid ah, mashiinada wax lagu xirto, laba cirbadood, lacag bixinno, dusha sare, makiinado, baaskiilyo, mashiinada wax lagu rito, mashiinada wax lagu xiro, miisaska wax lagu rito, miisaska birta.
Waxaan diyaar u nahay inaan fulino amarkaaga. Waxaan kugu casuumeynaa iskaashiga.
Paweł Kubiak - milkiilaha shirkadda
Shaqaalaheena aqoonta sare leh waxay ku faanaan sanado badan oo waayo aragnimo ah, waxay ku faraxsan yihiin inay bixiyaan caawimaad iyo talo xagga naqshadeynta iyo xulashada farsamada calaamadaynta ugu fiican - waxaan qaadi doonnaa amar kasta!
La kulan shirkadeena
Beerta mashiinka casriga ah
Tayada ugu tayada sareysa
Khibrad dheer oo tolmo leh
Waxaan ku faraxsanahay inaan wadaagno aqoonta oo aan bixinno talooyin
Bogagga balooggeenna waxaad ka heli doontaa macluumaad ku saabsan dalabkeenna iyo talooyin badan oo qiimo leh oo ku saabsan isbeddellada ka socda warshadeenna.
Eeg soo galitaanno dheeri ah
28 Oktoobar 2020
Daabacaadda DTG, oo ka calaamadeysaneysa hal gabal
DTG overprint - suurtagalnimada daabacaadda hal gabal DTG waa mid ka mid ah hababka cusub ee calaamadeynta ...
T-shaati oo daabacan
T-shaati oo daabacan shaashad kumbuyuutar casri ah ayaa loo isticmaalaa in lagu qurxiyo noocyo kala duwan oo dhar ah ...
Shirkadihii ina aaminay